राजकुमारी क्रूज अष्ट्रेलिया: अब यस बर्ष भन्दा तल गइरहेको छैन
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » अष्ट्रेलिया ब्रेकिंग न्यूज » राजकुमारी क्रूज अष्ट्रेलिया: अब यस बर्ष भन्दा तल गइरहेको छैन
अष्ट्रेलिया ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • cruising • समाचार • सुरक्षा • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • विभिन्न समाचार
राजकुमारी क्रूज अष्ट्रेलिया
राजकुमारी क्रूजले भर्खरै यस बर्षको डिसेम्बरको बीचमा अस्ट्रेलियाको क्रूज छुट्टिहरू रद्दको घोषणा गर्‍यो। यो पछि आउने धेरै यात्रुहरू पहिले नै रद्द गर्नुपर्‍यो।
रद्द गरिएको क्रूजमा बुक गरिएका अतिथिहरूलाई २०२२ मा बराबर क्रूजमा सारिनेछ।
पाहुनाहरूले अर्को विकल्पमा भावी क्रूज takeण लिनु पर्छ जुन करौंज भाडाको १०० प्रतिशत बराबर भुक्तानीको १० प्रतिशतको अतिरिक्त गैर-फिर्ती योग्य बोनस बराबर हुनेछ।
जो कोहीले रिजर्भेसन गरेको छ, und१ जुलाई, २०२१ सम्ममा फिर्ताको फिर्ताको लागि वा क्रेडिट अनुरोध गर्नु पर्छ।
क्रूज लाइनले भने कि यस क्षेत्रमा क्रूज बिदा पुनः सुरु हुने समयको बारेमा निरन्तर अनिश्चितताका कारण राजकुमारीले डिसेम्बर १,, २०२१ को बीचमा अस्ट्रेलियामा र बाहिर क्रूज रद्द गर्दैछ।
रद्द गरिएको क्रूजमा बुक गरिएको पाहुनाहरूको लागि, राजकुमारीले २०२२ मा पाहुनाहरूलाई बराबर क्रूजमा लैजान्छ। क्रुज लाइनले भने कि यसको बुकिing प्रक्रियाले अतिथिहरूको २०२१ भाडा उनीहरूको प्रतिस्थापन क्रूजमा सुरक्षित गर्नेछ। वैकल्पिक रूपमा, अतिथिहरूले भावी क्रूज क्रेडिट (एफसीसी) को १०० प्रतिशत बराबरको क्रूज भाडाको थप छनौट गर्न सक्दछ थप अतिरिक्त फिर्ता फिर्ता नहुने बोनस एफसीसीको १० प्रतिशत बराबरको क्रूज भाडा (न्यूनतम अमेरिकी $ २)) वा मूलमा पूरा फिर्ता भुक्तानीको फारम।
अनुरोधहरू प्राप्त गरिनु पर्छ एक अनलाइन फारम by जुलाई ,१, २०२१ वा अतिथिहरूले स्वत: FCC विकल्प प्राप्त गर्नेछन्। एफसीसीहरू कुनै पनि क्रूजमा बुक गर्न सकिन्छ जुन December१ डिसेम्बर, २०२२ सम्ममा बुक गरीएको थियो।
क्रूजहरू एक पेशेवर यात्रा सल्लाहकार मार्फत बुक गर्न सकिन्छ, वा १-1००-PRINCESS कल गरेर
(१-1००-800--774), वा भ्रमण गरेर कम्पनीको वेबसाइट.
यी रद्दताहरूद्वारा प्रभावित बुक गरिएका पाहुनाहरूको लागि सबैभन्दा हालको जानकारी र निर्देशनहरू, र FCCs र फिर्ताको बारेमा अधिक जानकारी, यहाँ अनलाइन फेला पार्न सकिन्छ। प्रभावित र रद्द क्रूजको बारेमा जानकारी.
राजकुमारी क्रूजको यसको वेबसाइटमा यो भन्नु थियो:
जीवन को धेरै पक्षहरु को जस्तै, यात्रा हालका घटनाहरु द्वारा कठिन हिट भएको छ। यो भारी मुटुले छ कि राजकुमारी क्रूजले हाम्रो विश्वव्यापी जहाज संचालनलाई अस्थायी रूपमा रोक्नको लागि अत्यन्त गाह्रो निर्णय गरेको छ। हामी जान्दछौं कि तपाईं हामीसँग यात्रा गर्न अगाडि बढ्नु भएको थियो, र हामी माफी माग्छौं र यी रद्दताको बारेमा तपाईंको निराशामा बाँड्न सक्छौं। पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्रस्ताव प्राप्त गर्न तपाईंले केहि कदम चाल्नु पर्दैन। तपाइँ तलको सेल मिति संग मिल्ने लिंकमा क्लिक गरेर तपाइँको क्षतिपूर्ति का विवरणहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
केही हप्ता पहिले मात्र, राजकुमारी क्रूजले घोषणा गरेका थिए त्यो सेप्टेम्बर २ 25 र नोभेम्बर २ 28, २०२१ बीच सुरू हुने, आठ प्रिंसेस मेडलियन कक्षा जहाजमा जहाजले फेरि अतिथिहरूलाई क्यारेबियन, पनामा नहर, मेक्सिको, हवाई, र क्यालिफोर्निया तटमा लैजान्छ।
पहिले रद्द गरिएको राजकुमारी क्रूज यात्राहरूको पूर्ण सूचीको लागि, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.